Nampanginina Tamin’ny Anaran’ny Chavismo, Fombam-pivavahana Politika Venezoeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 16:18 GMT
“Chávez Vive” (“Ho ela velona Chávez ”) avy amin'i Ricardo Patiño, ambanin'ny CC BY SA 2.0
Fintin'ny fandraisana an-tsoratra natao tamin'ny fandraisako anjara tamin'ny latabatra boribory ” Nampanginina tamin'ny anaran'Andriamanitra & Firenena” , tany amin'ny fihaonana faratampon'ny Haino aman-jerin'ny olom-pirenena Global voices ity.
Hatramin'ny niakaran”i Hugo Chávez teo amin'ny fitondrana tamin'ny 1999, ny famoronana ilay atao hoe ” sosialisman'ny taonjato faha 21″ dia nifangaro tanteraka tamin'ny fiheverana ny tanindrazana ho tahaka ny zavatra iray izay mila arovana amin'ny fahavalo, na avy any ivelany na avy ato anatiny. Mifamatotra lalina ny fotokevitry ny “tanindrazana”, ny firenena”, ny “fanjakana”, ny “governemanta” ary ny ” chavismo” ka tsy hay avahana.
Tsy firenena tena tia tanindrazana izahay taloha, ary araka ny hevitro, ny fahabangan'io endrika firenena mivondrona, tokana io no anton'ity hetsika politika ity. Hetsika mikendry ny hameno ny banga sy hamorona ao anaty fahatsapana miaraka ny fananganana “tanindrazana” izay tsy misy mahafaritra azy mazava tsara, na amin'ireo mpanohitra, na avy amin'ny rafitra politika manjàka. Midika izany, mazava ho azy, fa ny fandrahonana rehetra atao amin'ny politikan'ny antoko amin'izao dia heverina ihany koa fa loza mananontanona ny tanindrazana, famadihana mendrika fanasaziana amin'ny sazy ambony indrindra.
Sary teo am-pitenenan'i Marianne. Sary avy amin'i @mussanaf
Marianne miteny eo amin'ny latabatra boribory any Cebu. Sary avy amin'i @mussanaf
(Lasa vazivazy be mpampiasa, mankaleo ilay teny manafintohina hoe ” Nefa manana tanindrazana izahay” amin'izao fotoana izao. Tena mandreraka ahy ny mandre izany avy amin'ireo olona izay manohitra ny governemanta. Tsy tokony ho olon'ny famoronana sy olon'ny fiandohana ve isika ? Fa lasa aiza izany ?)
Nohamasinina ihany koa ny Chavismo, sy i Chavez izy tenany, indrindra taorian'ny tsy fahitana azy tamin'ny 2012. Ny endriny, izay hita hatraiza hatraiza, amin'ny tranobe sy ny rindrina ary ny biraom-panjakana rehetra dia niova ho fango sy nanjary ivon'ny fivavahana politika, miaraka amin'ny trano fivavahana sy toerana masina. Olona an'arivony no nanao tombokavatsa ny soniany, ary na aiza na aiza manerana ny firenena dia ahitàna ny sarivongana keliny. “Ho ela velona i Chávez ” no teny filamatra fampiasan'ny governemanta indrindra.
Amin'izao fotoana izao, dia nisy ny atontan-taratasy nantsoina hoe ” drafitry ny tanindrazana” nataon'ny governemanta Chavez, izay nahitàna ny taridàlana ara-pilôzôfia sy ara-politika ho an'ny ” sosialisman'ny taonjato faha-21-ny”. Taorian'ny nandraisan'i Nicolas Maduro ny toerana dia lasa lalàna io” drafitry ny tanindrazana” io.
Ity lalànan'ny tanindrazana ity, ankoatra ny zavatra hafa rehetra, no mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny famoronana ny ” fahambonian'ny fitaovan-tserasera”, sy ny ” fanomezana hery ny fampiasàna ny haino aman-jery ho amin'ny tetezamita mankany amin'ny sosialisma”. Izy io no mametraka ny fototra hanivànana ny fanehoan-kevitra amin'ny endriny rehetra ka manohintohina, amin'ny lafiny rehetra, ny rafitra politikan'ny ‘chavisme’, sady mamelatra ny fototra hiheverana ny fanoherana ho làlana iray amin'ny famadihana tanindrazana.
Raha vao tafapetraka izany ka misy olona tsy mifanaraka amin'ny governemanta sy ny fepetrany dia mpamadika, mazava ho azy, fa tsy azo ekena hanohy hiasa amin'ny fitantànam-panjakana ireny mpanohitra ireny (satria, tsarovy fa ny Fanjakana dia ny governemanta, ary ny governemanta dia ny tanindrazana). Noforonina ny laharan-tserasera iray sy ny kaonty imailaka mba hahafahan'ireo “mpiara-miasa tia tanindrazana ” mitoroka ireo olona tsy nanohana ny governemanta sy niasa tao amin'ny fitantànam-panjakana.
Volana vitsy lasa izay, nanomboka niady hevitra momba ny lalàna ( fanavaozana ny lalàna teo aloha) ny Antenimieram-pirenena, izay mety hanangànana ny lalànan'ny heloka bevavan'ny “cyberterrorisme” (asa fampihorohoroana amin'ny an-tserasera”. Ny “Cyberterrorisme” ato amin'ity volavolan-dalàna ity, dia faritana ho toy ny ” fanovàna tanteraka ny fandriampahaleman'ny vahoakan'ny Firenena amin'ny fampiasàna ny haino aman-jery elektrônika amin'ny ankapobeny”, ka mety ahazoana sazy 1 ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina. Mamela ihany koa ny olom-pirenena tsy ankanavaka hitàna na hanoka-monina 48 ora izay olona ahiahiana ho meloka amin'izany na amin'ny vesatra hafa momba ny “asa fampihorohoroana “. Tsara ny manamarika fa raha tsy nolaniana ity lalàna ity, dia misy ireo mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy voagadra noho ny fanaovana vazivazy ao amin'ny Twitter, izay heverina fa vazivazy fanakorontanana ny filaminam-bahoaka.
Araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra iray hafa andro vitsy lasa izay, rehefa tsy fahavalo ianao, dia karakarain'i Big Brother, ary dia hanaraka ny baikony. Mandreraka izany, fa avotra ianao.
Raha fahavalo ianao, amin'ny lafiny iray, dia tsy maintsy miaro tena. Mpamadika ianao. Olona tsy manana firenena ianao, tsy manana tanindrazana. Tsy mizaka ny zom-pirenena ianao.
Azia Atsinanana 6 ora izay
Azerbaijan 20 ora izay